Nwere ike iche na mgbasa ozi ọha na eze bụ ụzọ dị mma iji mee ka ndị ọbịa gị nwere mmasị. Ma mgbasa ozi mgbasa ozi nwere ojiji ya, mana ọ bụrụ na ị na-ewuli ndị na-ege gị ntị na-eguzosi ike n’ihe ma na-echekwa blog gị, ọ pụghị ịkatọ ელ.ფოსტა.
ელ.ფოსტა nwere ike ịbụ nkà na ụzụ oge ochie tụnyere mgbasa ozi ọha mmadụ, mana ọ ka mma karịa na ị natara ozi gị. N’elu mgbasa ozi mgbasa ozi, ozi dị iche iche na-akụkarịkwa ụda. N’aka nke ọzọ, ელ.ფოსტა na-anọ n’ime igbe mbata nke ndị na-ege gị ntị, ọ gaghị apụkwa ma ọ bụrụ na eleghara ya anya.
ჩვენი საიტი ელ.ფოსტით, ị gaghị enwe ihe gbasara njide agwa, oyiyi nkọwa, ọgwọ ruru, ma ọ bụ okwu mkparị.
Ọ bụ ya mere ego ji dị na listi ahụ. Nke a bụ otu esi nweta ndepụta gị na-arụ ọrụ maka gị.
1 Kedu esi esp meta listi email gị?
1.1 1 – ịdị Nwepụ ელ
1.2 2- Freebies na Ndịnaya Nwelite
3.3 3- უებერი
Kedu esi esp meta listi email gị?
N’ụzọ doro anya, iji mee ego ụ bụla site na email gị autoresponder, a ga-ebu ụzọ nweta ndị debanyere aha.
1 – ịdị Nwepụ ელ
Chee echiche iji otu onye na-enweghị iwe, enyi-enyi na-emepụta ụdị iji nweta bụna ndị ọzọ ndị debanyere aha. ნუ WHSR, ან Ninja Ninja Popup. თუ გსურთ გამოიყენოთ Ninja Popups და CodeCanyon. OptimMonster– ის უფასო პროგრამა, WordPress- ის საშუალებით, თუ თქვენ იცით, რომ მარა mma mma ọpụpụ na ụdị dị.
2- Freebies na Ndịnaya Nwelite
Usoro a na-ewu ewu iji nweta ndị zọ debanyere aha email bụ site n’inye ya freebie, d akka akwụkwọ e-akwụkwọ ma ọ bụ ozi email, nye nd, debanyere aha ọhụrụ.
Mgbe ị na-enye freebies chọrọ ego ihu oge n’ihu, ọtụtụ ndị na-ede blọgụ na-achọpụta na ọ na-enyere aka ịgbakwụnye mmelite ელ.ფოსტა.
Otú ọ dị, jide n’aka na ị ga-eburu n’uche na ị chọghị ka ndị ọzọ debanyere aha – wkwesiri ნრი ndị debanyere აჰა.
Nwepu ego gị kwesịrị ịbụ kpọmkwem ihe ndị na-eleta anya gị chọrọ ibudata. Bụrụ na nnwere onwe gị na-adọta ndị na-egeghị ntị, ọ ga-eme ka ọnụ ọgụgụ dị elu nke ịdebanye aha gị. Tụlee iji ndị na-agụ akwụkwọ na-enyocha ịchọta kpọmkwem ihe freebies na-adọrọ mmasị maka ndị na-ege gị ntị pụrụ iche.
Pat Flynn nke Smart პასიური შემოსავალი არ შეგეძლო გაეცნოთ საიტს თქვენს საიტზე, Bluehost და LeadPages.
Njikọ njikọta bụ ọzọ a na-ewu ewu iji jiri ego na-emepụta ndị na-emepụta ელ.ფოსტა. Ị nwere ike iji weebụsaịtị dị ka Na-ere ahịa ịchọta njikọ mmekọ mmekọ, ma ọ bụ soro ya na ụdị ndị ị na-eji ndị nwere mmemme mmemme, dị ka gị ụlọ ọrụ weebụ.
მე nwekwara ike inweta ego საიტი n’inweta ngwaahịa na ọrụ gị. Ngwaahịa dị iche iche, dị ka ọmụmụ na ebook, bụ ụzọ nkịtị iji nweta ego na-enweghị ego. Ọ bụ ezie na ha chọrọ oge iji nweta ego iji mepụta ngwaahịa ahụ, ha nwere ike ịnọgide na-enweta ego ị na-enweta ngwa ngwa ma ọ bụrụ na gị onwe gị zuru ezu, n’enweghị ọr aakaa გị.
Bụghị ozi ọ bụla ka ị ga-ere ahịa siri ike, ma ọ bụ na ị ga-enwe ọtụtụ nzapu.
Maka ihe kachasị ego, nye ọtụtụ ngwaahịa na ọrụ na ọnụahịa ihe dị iche iche na usoro gị niile. Naanị n’ihi na email gị nke na-ere ihe $ 500 adịghị arụ ụrụ, nke ahụ apụtaghị na ị ga-ada mbà na ndị ahụ debanyere aha. 50 აშშ დოლარი.
N’etiti ndị ọbịa ndị ọzọ ელ.ფოსტა ahịa ngwá ọrụ, Nọgide na-emechi bụ aha na-abịa mgbe niile (ọ dịghị iwu ọ bụla). E wezụga ọrụ ya n’ahịa ahịa, saịtị ahụ agbasawokwa iji tinye ọrụ ndị metụtara ahịa ahịa ndị ọzọ. Lelee Nlele kọntaktị Tim si na mgbe niile chọpụta ihe.
GetResponse bụ ngwá ụrụ ahịa ahịa anyị a akwadoro na nnukwu elektwasị anya na ndị na-emepụta ihe. Ha anịwo gburugburu karịa afọ 15. Anyị na-eji ya ịmepụta, zipụ, ma soro akwụkwọ akụkọ email na ndị debanyere aha anyị na ọnụahịa dị ụnụ. Lelee Ntụleghachi nk Jerry GetResponse chọpụta ihe.
AWeber bụ ihe na-ewu ewu na listi ელ.ფოსტა nke na-agụnye njirimara na-arụ ụrụ. ნუ na-enyekwa ngwá ụrụ ელ.ფოსტა ელ.ფოსტა ka ndere na-debanyere aha gị nwere ike oznweta ozi ntanetị ọhụrụ gị, na-eme ka akwụkwọ akụkọ gị kpamkpam.
MailChimp bụ akwụkwọ ozi ელ.ფოსტა na-ewu ewu bụ ndị a ma ama maka ịdị mfe nke ojiji na ezigbo ndebiri (ọ bụghị ịkọ abụ mara mma ha თილისმა). MailChimp na-enye ngwá ụrụ na-arụ ọrụ na akaụntụ ha akwụ ụgwọ naanị. საიტის na ngwa ngwaọrụ ha, ị nwere ike ịmepụta ọtụtụ ozi ịntanetị maka ndị debanyere aha ọhụrụ, ma ọ bụ ọbụna tinye ozi ịntanetị ka a zitere mgbe ihe ụfọdụ mepụta mepụta mepụta.
Ozi ọma ahụ bụ, ọ dịtụbeghị oge! Bido საიტი na anybanye maka ntinye akwụkwọ nhọrọ ელ.ფოსტა g na, na debe ụfọdụ nwepu aha na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ozugbo i nwere echiche nke ihe ndị na-ege gị ntị chọrọ, ị nwere ike ịmepụta ngwaahịa ha ga-ahụ n’anya.
Ọ bụ ezie na ndị na-emepụta ego na-ewepụta ego na-ewepụta oge iji guzobe, ozugbo ha nọ nọọnọdụ, ha nwere ike ịbụ ezigbo ego na-enweta ego maka ndị na-ede blọgụ na azụmahịa ndị dị nan.
Ho an’ny mpandainga, ny mailaka dia matetika mifandray amin’ireo mpamatsy lehibe სათამაშო ny Google
არ აქვს მნიშვნელობა, რა არის თქვენი ბლოგის წამოწყების მიზეზები, მკითხველს პოსტის წაკითხვის დაყენება მხოლოდ
გაქვთ დღიური, თუ თქვენ გაქვთ დღიური? შემდეგ ბლოგს ვასწავლი აქციებს? საპასუხოდ, ‘s’ არის ogitur